Zanu PF Yodzokorora Sarudzo muMatunhu Akaita Mutauro
Vatsigiri veZanu PF vachiratidzira vachiramba zvakabuda musarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika
Bato Zanu PF rakazivisa nezuro kuti sarudzo dzekutsvaga vacharimirira kana primary elections, dzichadzokororwa mumatunhu gumi nemanomwe emunyika, sezvo zvakabuda musarudzo idzi zvakapikiswa nevamwe vevakakwikwidza.
Matunhu akanyanyotsariswa neveruzhinji ndeeNorton neHarare South, uko vakuru-vakuru vesangano revakarwa hondo yerusununguko, VaChristopher Mutsvangwa, naVaDouglas Mahiya, vakakwikwidza. VaMutsvangwa, avo vanove chipangamazano chemutungamiri wenyika, naVaMahiya, vakapikisa zvakabuda musarudzo idzi vachiti dzakanga dzisina kufambiswa nemazvo.
VaMutsvangwa vakakundwa naVaLangton Mutendereki, ukuwo VaMahiya vachikundwa naVaTongai Mnangagwa.
Mamwe matunhu achadzokororwa sarudzo anoti Glenview South, neHwata muHarare, Shamva North, Shamva South, neMazowe West kumashonaland Central; Chegutu East, Chegutu West, Zvimba North, Zvimba South, Chinhoyi Central, neMakonde kuMashonaland West; Shurugwi, kuMidlands; Gutu East kuMasvingo; Chipinge Central neBuhera West kumanicaland.
Boka rinoona nezvegwara remusangano muZanu PF rakazvisa mugwaro iri kuti mazuva achaitwa sarudzo idzi achaziviswa munguva pfupi inotevera, uye zvikwata zvakaiswa kuti zviongorore sarudzo idzi zvichafambisawo zvakare sarudzo dzematunhu mumawadhi asina kunge aitwa sarudzo.
Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika, uye vari munyori mubato reMDC-T inotungamirirwa naVaNelson Chamisa mudunhu reAmerica, Doctor Wangu Mazodze, vanoti mutungamiri weZanu PF VaMnangagwa vari padambudziko guru nekuti kutonga kwavo muranda wevakarwa hondo, avo vanoti tisu takakubatsirai kupinda pachigaro, pamwe nemauto anotiwo ndiwo akaita kuti vapinde panyanga.
Doctor Mazodze vanoti nekudaro, Zanu PF inotofanirwa kuita zvinofadza mapoka maviri aya.